Guddinaa Tumsaa - Wikipedia
Luba Guddinaa Tumsaan bara 1929 Wallagga keessatti iddoo Boojjii jedhamutti dhalatan. Luba Guddinaan obboleessa waa'ee Oromootif wareegame Baaroo Tumsaa jedhamu qabu.
Waldaan Makaana Yesuusii dandeettii geggeessummaa fi beekumsa obbo Guddinaa waan hubatteef, bara 1963tti gara Ameerikaa deemanii Luter Tiyoolojikaal Seminaaritti tiyooloojii akka baratan goote. Ijoollee isaanii shananii fi haadha manaa isaanii Itoophiyaatti dhiisanii 1963 amma 1966tti achitti barumsarra turan. Yeroo barumsa xumuran baachiler digirii diviiniitii fudhatan.
Dura Ta'aa Waldaa Makaana Yesuus Ta'uu Isaanii[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Erga barumsa isaanii xumuranii booda, Luba Guddinaan gara Itoophiyaatti deebi’an. Akkuma deebi’aniin Jeneraal Sekreeterii (Dura ta’aa) Waldaa Makaana Yesuusii Itoophiyaa ta’anii muudaman. Bara 1966 kaase hanga 1979 ajjeefamanitti jeneraal sekreterii ta’anii tajaajilaa turan.
Geggeessummaan isaanii waldaan Wangeela, kabaja ilma namaa fi walqixxummaa sabaa irratti akka xiyyeeffattu godhe. Yaadni isaanii tiyooloojii Kiristoos bu’uura godhatee fi guutummaa ilma namaa irraatti xiyyeffatu ture. Barumsa argachuu, dhukkubsataa yaaluu, guddina diinagdee, hawaasa tokkummaasaa cimaa, fi amantiitti cimuu walitti kan qabate ture. “Afrikaa keessatti siyaasni eenyu jiraachuu akka danda’uu fi eenyu du’uu akka qabu murteessa” jechuun komiidhan dubbatu.
Mootummaa fiwudaalii Hayila Sillaasee warraa balaaleffatan xiqqoo keessa Luba Guddinaan tokko turani. Boodarras waan mootummaan Dargii jedhe namoota “lakki” jedhan keessaa tokko turan.
Qabamuu fi Ajjeefamuu Isaanii[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Luba Guddinaan bara 1979 mootummaa Dargiitin qabamanii mana hidhaatti galan. Pirezidaantiin Federeeshinii Luteraanii Addunyaa yeroo sanaa lubbu isaanitif waan sodaataniif Pirezidaantii Tanzaaniyaa yeroo sanaa Juuliyees Nereeree kadhachudhaan dhimma isaanii keessa akka seenu godhan. Nereereenis mootummaa Itoophiyaa wajjin dubbatanii akka gad lakkifaman godhan. Carraa kanatti fayyadamanii akka biyyaa baqatanii Tanzaaniyaa jiraatan yeroo gaafataman, Luba Guddinaan garuu waldaakoo gadhiisee hin baqadhu jechuun didan.
Waldaan koo fi amantooni koo as jiru. Egaa ani dura bu’aa waldaa ta’ee oddon jiruu akkamittan yeroo qormaataa kana keessatti amantoota gatee baqadha? Irra deddeebi’ee abbootii wangeelaa wajjin asuma turuun akka narra jiru itti himeera.
jechuudhan didani. Macaafaa qulqulluu keessaa 2Qor 5:15 isa
Egaa warri jiraatan si’achi isa isaaniif jedhee du’ee du’aa kaafameef malee, ofii isaaniitiif akka hin jiraannetti, inni hundumaaf du’eera
Gaafaa Adoolessa 28, 1979 Luba Guddinaan qabamanii ajjeefaman. Duuti isaanii mullataa fi dandeettii guddaa tiyooloojiirratti isaan qabanii fi waldaan Itoophiyaa yeroo sanatti baayyee barbaaddu akka dhabdu godhe. Tiyooloojii Afrikaatiifillee miidhaa guddaa ture.
Yaadanno Luba Guddinaatif jecha dhaabbanni Gudina Tumsa Foundation jedhamu dhaabbateera. Kaayyoon dhaabbata kanaas namoota rakkatoo fi miidhamoo ta'an gargaaruudha. Dhaabbanni GTF YKN Gudina Tumsa Foundation jedhu kun Oromoota karrayyuu barsiisuuf karaa guddaa saaqeera.
https://web.archive.org/web/20130504151843/http://www.dacb.org/stories/ethiopia/gudina_tumsa.html Gudina Tumsa, 1929 to 1979, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus
Ethiopia, Dictionary of African Christian Biography
https://web.archive.org/web/20160305175717/http://www.staffangrenstedt.se/files/rev-gudina-tumsa-in-kambata-2011.pdf The Ministry of Qes Gudina Tumsa in the Kambata/Hadiya Region
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Guddinaa_Tumsaa&oldid=37452" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 15 Guraandhala 2022, sa'aa 06:35 irratti.